International Hotel Mashaariicda - Project Hotel Armati In Africa
Project Hotel Armati In Africa
Mid ka mid ah Armati 5 bilaabaan mashruuca hotel ee Koonfur Afrika, Africa, soo dhaweynayaa in ay booqo hotel this si ay u arkaan our qasabada.
goobta Tani hotel ee Johannesburg ee Viruska, degmada ganacsiga Julius Karangi ayaa magaalada, kaliya waa ka Gautrain Station iyo daqiiqo ka soo jiidashada sida Nelson Mandela Square iska socod gaaban. Martidu raaxaysan fududahay in Airport International Tambo AMA, taas oo kaliya 30 kiiloomitir hotel ku helaan. Dooro ka qolalka 290 la waxyaabaha sida-xawaaraha sare ee Free, Internet wireless martida deggan hoteelka, ama doorato penthouse ah horyalka waayo meelaha xusullada la kordhiyay. Martidu jooga Class Business Rooms, shidmaan iyo penthouses raaxaysan helaan Class Business ee Lounge. Daawo sida maqaayad diyaariyo cunnada Talyaani casriga ah ee jikada furan Vivace. sharraxaa qorraxda iyo balligii dibadda dabaqa 8th ah, HBS a nasto oo si fiican u qalabaysan Planet Fitness Platinum Gym yabooho fursado ku filan si ay u unwind. Adeegyada Tani hotel ee Johannesburg ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah baabuurta ammaan. ciidammadu Event leenahay karaa auditorium 90 kursi ama mid ka mid ah qolalka shirka 15 si fiican u qalabaysan ganacsiga iyo bulshada isugu.
Mashruuca musqusha hotel Africa
AF SQ AM AR HY AZ EU BE BN BS AF SQ AM AR HY AZ EU BE BN BS CA CEB NY ZH-CN zh-TW CO HR CS DA NL EO ET TL FI FR FY GL KA DE EL GU HT HA Haw IW HI HMN HU IS IG ID GA IT JA JW KN KK KM KO KU KY LO LA LV LT LB MK MG MS ML MT MI MR MN MY NE NO PS FA PL PT PA RO RU SM GD SR ST SN SD SI SK SL SO ES SU SW SV TG TA TE TH TR UK UR UZ VI CY XH YI ZU dhamaadka sare qasabada biyaha musqusha saaraha qasabada biyaha musqusha saaraha qasabada biyaha qubeyska saaraha hardware musqusha accessories musqusha tayo sare leh hotel facuet musqusha Kulankii qubeyska raaxo nidaamka jet jirka saaraha qasabada shidma china qarinaayay saaraha Roob nidaamka Roob china warshad china accessories qubeyska qeybiyaha derbiga Jaha-qeybiyaha tuubada